संवाद - Pradesh Today संवाद - Pradesh Today
दाङमा नेसनल प्याब्सनअन्तर्गत ७९ विद्यालय छन् । शिक्षाको गुणस्तरियताका लागि ती विद्यालयले विभिन्न किसिमले आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका छन् । शिक्षामा सरकारलाई निजी विद्यालयले सहयोग गरेपनि सरकारले सहयोग नगरेको निजी विद्यालय सञ्चालक बताउने गरेका छन् । सरकारले निजी विद्यालयलाई साँघुरो घेराभित्र राखेर समस्यामा पार्ने गरेको निजी विद्यालय सञ्चालकको गुनासो छ…
बालबालिकाहरूको वृद्धि विकास र सिकाइका लागि एकीकृत पाठ्यक्रम लागू हुँदैछ । यही शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १–३ कक्षामा एकीकृत पाठ्यक्रम लागू हुँदैछ । एकीकृत पाठ्यक्रममा लेखक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका लेखक, गणित शिक्षा परिषदका केन्द्रीय महासचिव रमेशप्रसाद अवस्थीसँग एकीकृत पाठ्यक्रमका विषयमा रहेर टुडे सम्वादमा कुराकानी गरेका छौं । एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको के…
महिलाहरुको आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा सशक्तिकरणका लागि ग्रामीण महिला उत्थान स्थापना भएको करिब २५ वर्ष भयो । दाङसहित सल्यान, प्यूठान, नेपालगञ्ज लगायतका जिल्लामा शाखा स्थापना गरेको संस्थाले विभिन्न सहकारी तथा लघुवित्त सञ्चालन गरेको छ । संस्थामा अहिले करिब ४२ हजार महिलाहरु आवद्ध भएका छन् । संस्थामार्फत महिला दिदीबहिनीहरु व्यक्तित्व र नेतृत्व विकास गर्दै…
बढ्दो जनसंख्यालाई पानीको सहज व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ । दैनिकजसो पानीको माग बढिरहेको छ । तर मुहानका स्रोत झन दिनप्रतिदिन घटिरहेको छ । तुलसीपुरमा पनि बढ्दो सहरीकरणले पानीको मागलाई बढाइरहेको छ । अहिलेकै अवस्थामा पानीको आपूर्ति हुने हो भने दीर्घकालिन समस्या पर्ने देखिन्छ । जनताको मौलिक अधिकारका रूपमा रहेको खानेपानीको…
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ स्थित कुहिरेपानीमा मानसिक सन्तुलन गुमाएका व्यक्तिहरूको लागि पुनस्र्थापना गृह स्थापना हुँदैछ । पुनस्र्थापना गृहमा के कस्ता काम भईरहेका छन् ? भन्ने विषयमा प्रेरणाका लागि अभियान नेपालका अध्यक्ष श्रीधर कुमार लम्सालसँग कुराकानी गरेका छौं । बन्दै गरेको भवन के को लागि हो ? मानसिक सन्तुलन गुमाएर…
विकास निर्माणको काम सुस्त हुँदा निर्माण व्यवसायी विभिन्न समयमा आलोचित हुने गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा नागरिकले सास्ती पाउनुपरेको अवस्था पनि छ । निर्माणका लागि कच्चापदार्थ, समय अभावलगायतका कारण देखाउँदै निर्माण व्यवसायी पनि पानीमाथिको ओभानो प्रयास गर्छन् । देशमा संघीय संरचनासँगै नागरिकले विकासको तिब्र आकांक्षा गरेका थिए । तर विभिन्न…
तुुलसीपुर उपमहानगरले शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न प्रयास थालेको छ । शिक्षाको विकासबिना अरू विकास असम्भव छ भनेर उपमहानगरले शैक्षिक सुधारका लागि शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात मिलाउन विद्यालय मर्जको अभियानदेखि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी तथा अभिभावकको विश्वसनीयता बढाउन उपमहानगरले सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउनुपर्ने नीति लिएको छ । उपमहानगरभित्रको…
नयाँ संघीय संरचनामा स्थानीय तहमा शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थापित भएका छन् । स्थानीयतहदेखि संघ सरकारसम्म शिक्षासम्बन्धी काम समन्वय गर्नका लागि अहिले जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई छ । स्थानीयतहमा शिक्षाका अधिकार स्थापित भएपनि इकाईमार्फत शिक्षक पोष्टिङदेखि सरुवाका कामहरु हुने गरेका छन् । जिल्लामा शिक्षाको सुधारका लागि भएका प्रयास र…